ताजा खबर बेलायती–स्वेडिस फर्मास्युटिकल कम्पनीले बनाइरहेको खोप कहिले आउँछ बजारमा ? – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /International/ताजा खबर बेलायती–स्वेडिस फर्मास्युटिकल कम्पनीले बनाइरहेको खोप कहिले आउँछ बजारमा ?
ताजा खबर बेलायती–स्वेडिस फर्मास्युटिकल कम्पनीले बनाइरहेको खोप कहिले आउँछ बजारमा ?
बेलायती–स्वेडिस फर्मास्युटिकल कम्पनीले बनाइरहेको खोप कहिले आउँछ बजारमा ?
क्यानबेरा,भदौ ३ । बेलायती–स्वेडिस फर्मास्युटिकल कम्पनी अस्ट्राजेनिकाले विकास गरिरहेको कोरोनाभाइरसको सम्भावित खोप खरिद गर्न सम्झौता गरिएको अस्ट्रेलियाले घोषणा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री मरिसनले अक्सफोर्डको परीक्षण तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको र यो सफल हुन अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यदि यो खोप सफल प्रमाणित भए हामी तत्कालै उत्पादन गरेर २ करोड ५० लाख अस्ट्रेलियालीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने छौं ।”
प्रधानमन्त्री मरिसनले अस्ट्रेलियाका छिमेकी मुलुकलाई पनि यो खोप उपलब्ध गराउन सकिने बताउनुभएको थियो, तर उहाँले यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण दिन अस्वीकार गर्नु भयो ।
उहाँले खोपका बारेमा इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोडा, पपुवा न्यू गिनीका प्रधानमन्त्री जेम्स मारापे र फिजीका प्रधानमन्त्री फ्रान्क बैनीमारामासँग पनि हालै छलफल गर्नु भएको थियो । मरिसनले संवाददाताहरुलाई भन्नुभयो, “अस्ट्रेलियाले प्रशान्त क्षेत्रीय राष्ट्रहरुलाई मद्दत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।”
भारतमा एकैदिन ५७ हजारले जीते कोरोना
१४८ दिनपछि भुइँका जहाजले आकाश छुँदैछन्…